10 milyaard oo loo qoondeeyey degmooyinka iyo gobollada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 13 april 2016 kl 09.05
sawir: Jonas Ekströmer/TT.
Dhanka kale hoggaanka dawladda Sweden ayaa heshiis wada-jir ah oo uu la gaaray xisbiga ey xulufada yihiin ee Vänsterpartiet.
Midkaasina oo la xiriira miisaaniyadda dayrta ee sannadka in 10 milyaard ay dawladdu ku taageerto degmooyinka iyo maamullada gobollada, laga bilaabo sannadka foodda innagu soo haya. Iyadoona uu sheegay madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven in middaasi ay macnaheedu tahay iney miisaaniyaddaasi adkeeyn doonto nidaamka hab-nolol wanaagga dalka.
– Waana mid loo baahan yahay, maadaama muddo 8 sannadood ah oo ey maamulka gacanta ku hayeen xisbiyada garabka midig, kuna tallaabsadeen canshuur dhimis ballaaran, sida uu sheegay Löfven.
Sidee ayaad haddaba u miisaaniyad gelin doontaan?
– Waxaannu ku soo ban-dhigi doonnaa miisaaniyadda. Wasiirka maaliyadda ayaa soo ban-dhigi doona kharashka iyo dakhliga dawladdu ku howl-geli doonto ee miisaaniyadda.
10-kab bilyan ayaa ah markii ugu horreeysay ee wixii ka dambeeyey sannadihii bartamihii 1990 ee loo qoondeeyo degmooyinka iyo gobollada.
Halka uu wasiirka tacliinta Gustav Fridolin, isla-,arkaana ah hoggaamiyaha xisbiga Doogga (Miljöpartiet) uu sheegay in tallaabadani tahay mid macne ballaaran ku fadhida:
– Waa in ammaan lagu ahaado hab-nolol wanaagga Sweden, hadday noqon lahayd dhanka iskuulka, dar-yeelka waayeelka iyo in bulshadu iska fekerto oo is dammaanad qaaddo. Waxaannu iminka ka baxeynaa xilligii dhaqaalaha la dhimi annaga oo miisaaniyad gelineeyna hor-umarka bulshada.
Miisaaniyadda dawladda ee 10-ka bilyan ah ayuu shuruud ka dhigay xisbiga Bidixda (Vänsterpartiet) intii uu socday wada-hadalkii miisaaniyadda ee xisbiyada.
– Kolkii ey bilowdeen wada-haddalladii miisaaniyadda ayaannu markiiba miiska soo saarney fikirkan. Waana mid nalaga aqbalay oo aannu ku guuleeysanney, sida uu farxad ugu sheegey hoggaamiyaha xisbiga Bidixda Jonas Sjöstedt.
onsdag 13 april 2016 kl 08.07